Coggle: Sarintany tsotra sy iarahan'ny mpijery ifotoran'ny saina | Martech Zone
Alatsinainy Janoary 22, 2018 Alatsinainy Janoary 22, 2018 Douglas Karr
Androany maraina, dia nantsoina niaraka tamin'i Miri Qualfi avy tany Fanbytes ary efa nametaka hevitra vitsivitsy momba ny ho avy izy Resadresaka Martech podcast ao amin'ny Snapchat. Ny fitaovana nosokafany dia nahafinaritra - Coggle.
Coggle dia fitaovana an-tserasera amin'ny famoronana sy fizarana sarintany saina. Izy io dia miasa an-tserasera ao amin'ny tranokalanao: tsy misy na inona na inona alaina na apetraka. Na mandray naoty ianao, sahirana, mikasa, na mamorona zavatra mamorona tampoka dia tsotra dia tsotra tokoa ny maka sary an-tsaina ny hevitrao amin'ny Coggle. Zarao amin'ny sarinao namana na mpiara-miasa aminao araka ny itiavanao azy ny sarintaninao, ny tabilao misy anao na ny sarinao. Hiseho eo no ho eo amin'ny fanamoriana azy ireo na aiza na aiza misy anao ny fanovana ataonao.
Ity misy horonan-tsary fampidirana miaraka amin'ny topy topy manampy ny kisary voalohany:
Endri-javatra momba ny Solution Coggle's Mind Map:
Fiaraha-miasa amin'ny fotoana tena izy - Asao ny mpiara-miasa aminao hiara-miasa aminao, amin'ny fotoana iray, amin'ny sarinao.
Tehirizo ny fanovana rehetra - Jereo ny fanovana rehetra amin'ny sary ary manaova kopia avy amin'ny teboka rehetra mba hiverenanao amin'ny kinova taloha.
Mampakatra sary tsy voafetra - Hisintona-ary-mitete sary avy eo amin'ny biraonao mankany amin'ny kisaryo. Tsy misy fetra ny isan'ireo sary azonao ampiana.
Manampia Text sy sary mitsingevana - Manampia labozia an-tsoratra sy sary izay tsy ao anatin'ny hazo kisary mba hanamarihana ny ampahany amin'ny sarintany.
Ny famandrihana mandray karama koa dia ahafahana manaraka ireto:
Kisary tsy miankina tsy manam-petra - Mamorona sary manokana arak'izay tianao. Raha manafoana ny famandrihanao ianao dia mijanona irery, ary mitazona ny fidiranao ianao.
Mamorona tadivavarana ary miaraha amin'ny sampana - Midira amin'ny sampana ary mamorona tadivavarana mba hamoronana sary matanjaka sy malefaka kokoa maneho ny fizotran'ny dingana sy zavatra hafa mandroso.
Fiaraha-miasa tsy misy fananganana - Avelao ny olona maromaro hanova kisarisary amin'ny fizarana rohy miafina amin'izy ireo fotsiny. Tsy ilaina ny fidirana.
Hevitra fanombohana marobe - Manampia singa afovoany marobe amin'ny sarinao mba hametrahana lohahevitra mifandraika amin'ny sehatr'asa iray.
Atombohy ny fampiasana Coggle maimaim-poana anio!
Fampahafantarana: Mampiasa ny saram-pandefako an'i Coggle ao anatin'ity lahatsoratra ity aho.
Tags: fiaraha-miasa miorina amin'ny browsercogglefiaraha-miasasaryKisarytabilao mikorianamampakatra sarysarintanysarintany an-tsainafiaraha-miasa amin'ny Internet